Qisooyin Kale Oo Murugo Leh Oo Kasoo Baxay JEEL OGAADEEN - Jigjiga Online
HomeSomalidaQisooyin Kale Oo Murugo Leh Oo Kasoo Baxay JEEL OGAADEEN
Qisooyin Kale Oo Murugo Leh Oo Kasoo Baxay JEEL OGAADEEN
Jigjiga (JigjigaOnline) – Xabsiga Jeel Ogaadeen wuxuu ku yaallaa magalada Jigjiga, wuxuuna ku fadhiyaa dhul weyn waxaana ku wareegsan darbi aad u dheer oo salig lagu wareejiyey.
Albaabka hore ee laga soo galayo inkasta oo uu ku qoran yahay Xabsiga Dhexe ee Deegaanka Soomalida haddana xabsiga wuxuu ku soo caan baxay oo loo yaqaanna ‘Jeel Ogaadeen’.
Maamulki hore ee Cabdi Maxamuud Cumar wuxuu marar badan uu isku dayay inaan magaca ah ‘Jeel Ogaadeen’ xabsigaasi looga yeerin.
Madaxa Komishiinka Asluubta Deeganka Soomaalida Bashiir Cabdi wuxuu BBC u sheegay inkasta oo xabsiga la yaqaannay uu ahaa Jeel Ogaadeen haddana waxaa jiray gooba kale oo qarsoodi ah oo dadka lagu silcin jiray.
Deyrka kore ee xabsiga marka gudaha loo sii galo waxaa ku yaalla darbi kale oo gudaha ah.
Dad horay xabsigaasi uga xirnaa oo BBC u warramay waxay sheegeen inuu xabsiga dhowr qaybood uu ka kooban yahay ayna jireen qolal magac kala duwan loo bixiyey oo macabiista lagu ciqaabo.
Waxaana qolalkaasi ka mid ah 7aad, 8aad iyo 9aad. Qolka 8aad loo yaqaanno waa qol mugdi ah waxayna sheegeen maxabiistu in lagu xiri jiray dadka lagu soo eedeeya falalka aragagixisada iyo xubnaha jabhadda ONLF.
Qolka sideedaad oo hal dhinac u dheer afar albaab ayuu leeyahay albaab kastana gudaha wuxuu ku sii leeyahay dhowr qol. Haddaba, dadka qolka siddeedaad ku xirnaa ee silaca kala soo kulmay waxaa ka mid ah Cali Xasan.
Cali inta aan Jeel Ogaadeen lagu xirin, wuxuu ka mid ah askarti ilaaliso xabsiga wuxuuna askarinimo uu ku soo shaqeeyey 17 sano.
“Maalin maalmaha ka mid ah aniga oo shaqada ku jira ayuu taliyahayga ii yeeray wuxuuna igu yiri ‘kaalay maxabiista garaac oo jirdil ku samee’ anigana waan ka diiday waxaanna ku soo noqday goobti shaqada. Markale ayuu haddana ii yeeray sida oo kale ayuu igu yiri haddana waan diiday. Taliyaha xabsiga marka arrinteyda maqlay wuxuu igu yiri ‘Adiga waxaad xiriir la leedahay ONLF’ sidaa ayaana la iigu xiray” ayuu yiri isaga oo ka warbixinayo sida uu xabsiga ku galay.
Cali wuxuu sheegay inuu xabsiga gaar ahaan qolka 8aad uu ku xirnaa 20 bilood uu muddo ku jiray god ay masas ku jiraan, garaacid, jirdil iyo dhibaata badanna looga geystay xabsiga.
“30 maxbuus annaga oo ah ayaan qolkaa yar ku xirneen sida eyda ayaan u sexan jirnay oo dusha ayaan iska wada fuuli jirnay maadaamaa qolka uu ciriiri ahaa. Askartana waxay nagu sameeynayeen si aan u seexan qolka dhan biya ayey ka soo buuxin jireen.” ayuu yiri Cali Xasan.
Albaabbada xabsiga oo bir ka sameeysan haddana meelaha bannan oo dhan owday sibir si ay hawo iyo iftiin nooga soo gelin isla-markaana biyaha gudaha qolka lagu soo shubo ay dibadda ugu soo bixin biyuhuna ula fariistaan.
“Qolka oo dhan biya ayuu noqonayaa oo biya ayaa la fariisanaya marka sideed biya ugu dul seexaneysaa? marka maadaamaa aan biya ku seexan karin anaga oo darbiga wajiga ku hayno oo taagan ayuu waaga noo baryayey” ayuu yiri Cali.
Cali oo ka warramaya waxyaabihi uu xabsigaasi kala kulmay wuxuuna wariyaha BBC ee la socday uu ku yiri nakeen gurigeyga ayaan ku soo tusayaa wuxuuna geeyey god bosaneera ah oo ay saxarada musqusha ku soo dhacdo oo korka ka furan ‘ godkan oo masas badan waxaa ku jiray muddo badan waxaanna ku wada xirneyn aniga iyo wiil wariya ah oo uu magaciisu sheegay’.
Xabsiga Jeel Ogaadeen waxaa sida oo kale ku yaalla laba guri oo guriyaha eyda la eg oo salig ku wareegsan. Mid ka mid ah gurigaasi waxaa ku jira Harmacad midna waxaa ku jira Dhurwaa sida ay ilaalada xabsiga BBC u sheegeen.
Cali wuxuu inoo sheegay in Harmacadka iyo Dhurwaaga guriyaha ay ku jiraan maxabiista lagula xiri jiray. Harmacadka inkasta oo dadka uu ka cabsado haddana mararka qaar maxabiista ciddiyaha ayuu ku waxyeelleeyaa ayuu yiri.
“Arrimahan oo dhan waxay ay askarta xabsiga ay maxabiista ugu sameeynayaan ayey ku sheegaan ayuu yiri Cali iney maxabiiska ku baaraan si ay xog uga helaan, marka uu silica kaa batana magac aan jirin ayaad shegeysa si aad naftaada u adbaadiso” ayuu yiri.
Maxbuuska kale ee xabsiga ‘Jeel ‘Ogaadeen’ Silica kala kulmay waxaa ka mid ah Maryam Cabdul oo ah hooyo lix carruur ah dhashay.
“Aniga oo la igu eedeyey inaan ka tirsanahay ONLF xabsiga Jeel Ogaadeen iyo Xabsiga Qaalitii ee Addis Ababa waxaan ku xirnaa 10 sano iyo 8 bilood” ayey tiri.
Maryam marka ay xusuusato silici ku soo maray xabsiga Jeel Ogaadeen indhaheeda ilma ayaa soo dhaafaysa.
“Habeen iyo Maalin sida ay ii garaacayeen hadda xafaayad ayaan isticmaalaa”. Maryama jirdilki loo geystay iyo adeeg caafimaad oo ay helin darteed maadaamaa ay kaadida cishan karin wxay ku qasbanaatay iney marweliba xafaayad xirato.
“Maxabiista marka ay qolka ka bixiyaan oo ay qol kale u wareejinayaan gacan iyo lug ayaa silsilad looga xirayey, qof gacan iyo lug ay silsilad ugu xiran tahay sida uu u tallaabsado ayaa adag.”
Xadgudubyada dhinaca jinsiga ee haweenka maxabista ah loo geysto waa mid aad u dag ayey tiri. ” abeenki ayey imanayaan gabdhaha quruxsan oo da’da yar ayey la baxayaan waxayna leeyihiin ‘Kaalay Komishineerka (taliyaha xabsiga) shaah u kari’ dumarka waaweyn ma rabaan oo ma wataan.
Xabsiga Jeel Ogaadeen carruurta hooyooyinkooda ayaa lala xiri jiray, maxbiiskana maalinti oo dhan waxaa cunta ahaan loo siinayey rooti qamadi laga sameeyo iyo koob shaah ah oo keli ah.
“Dambibarayaasha su’aalaha ay ku weydiinayaan si aad jawaab degdeg ah uga bixiso baaldi kaadi iyo saxara la isku daray uu ka buuxa ayaa madaxa lagaaga keenayaa mararka qaarna inta qofka xarig lagu xiro ayaa saacada badan qorraxda la fariisinayaa” ayey tiri.
Ilaa iyo hadda xabsiga gudahiisa waxaad ku arkeysaa baaldiyo kaadida iyo saxarada ay ku angageen oo loo isticmali jiray maxabiista.
Silica Jeel Ogaadeen maxabiista oo keli ah kuma koobneyn balse wuxuu dhibaata aan yareyn uu u geysan jiray ehelada maxabiista xiran.
Caasha ninkeeda wuxuu ahaa shaqala dowladeed, Caasha ninkeeda sababa aan la garaneyn ayaa goobtiisa shaqada looga soo xiray laguna xiray xabsiga Jeel Ogaadeen.
Caasha oo ah hooya shan carruur ah dhashay inkasta oo ay nasiib u yeelan iney ninkeeda aragto haddana maalin walba ninkeeda ayey cunto u geyni jirtay.
Hase yeeshee, Caasha oo aan nasiib u yeelan iney ninkeeda aragto oo maalin walba cunto geyneysay ninkeeda wuxuuba geeriyooday marki xabsiga la geeyey maalma kaddib.
Maxabuus ninkeeda la xirnaa oo xabsiga laga soo daayey ayaa Caasha u sheegay inuu ninkeeda dhintay.
Caasha waxay war ka haynin sababta uu ninkeeda u dhintay, xilliga uu dhintay iyo halka meydkiisa lagu aasay intaba.
Xasan Faarax oo ilalada xabsiga Jeel Ogaadeen ka mid ahaa wuxuu sheegay maxbuuska xabsiga ku dhinta in la dhihi jiray wuu xauunsaday dhakhatrna la geeyo kaddibna sidaa lagu aaso oo aan ehelkiisa loo sheegin. Dadki la xirnaa qofka dhinta marka xabsiga laga soo daaya ayay eheladooda u xaqiijiyeen inuu dhintay.
Madaxa Komishiinka Asluubta Deegaanka Soomaalida Bashiir Axmed wuxuu sheegay xabsiga Jeel Ogaadeen iyo gooba kale in kumannaan maxabiis ah silic looga geystay.
“Xabsiga Jeel Ogaadeen oo 1999 la aasaasay dadka ku xirnaa waxaa lagu qiyasaa 11,000 – 15,000 oo qof, iyada oo dadki xabsigaasi ku dhintay tiradooda rasmiga ah aan la garaneyn waxayna u baahan tahay baaritaan dheeraad ah” ayuu yiri.
Ilaa iyo haddana waxay dowladda gacanta ku dhigtay ayuu yiri seddex ka mid ah dadki madaxda ka soo ahaa xabsigaasi waxaana hadda socota dhageysiga dacwadahooda, waxaana jira iney jiran dad aan weli la qaban oo lagu raad joogo.
Jeel Ogaadeen muxuu ku dambeynayaa
Komishiinka Asluubta Deegaanka Soomaalida Bashiir Axmed wuxuu sheegay “Wixi xabsigaasi ka dhacay waa mid u baahan in marwalba la xusuusto marka waxaa noo qorsheysan inaan masxaf ka dhigno.” ayuu yiri.
Waxaanna xaqiijinayaa ayuu yiri inuu jirin hal maxabuus oo maanta xabsiyada Deegaanka Soomaalida siyaasad ugu xiran ayuu yiri.
Donald Trump oo wax aanu fileyn kala kulmay Magaalooyin uu booqday
DEG DEG: Guddi doorasho oo labaad oo lagaga dhowaaqay Jubaland